6 Qalabka Ecommerce si aad u Keento Ganacsigaaga Deegaanka Halka ay Macaamiishaadu joogaan: Online | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/6 Aaladaha Ecommerce si aad u Keento Ganacsigaaga Deegaanka Halka ay Macaamiishaadu Joogaan: Online
6 Aaladaha Ecommerce si aad u Keento Ganacsigaaga Deegaanka Halka ay Macaamiishaadu Joogaan: Online
Waa wakhti adag in la noqdo ganacsi yar in la sheego ugu yaraan, gaar ahaan haddii aad ku shaqaynayso meel jireed. Si kastaba ha noqotee, waqtiyada adag waxay u oggolaanayaan kuwa doonaya inay hagaajiyaan awoodda si ay u koraan marka tartankoodu hoos u dhaco. Haddii aad tahay meherad maxalli ah oo raadinaysa inaad bilowdo inaad siiso macaamiishaada fursado iibka khadka tooska ah oo ay ku jiraan quful dheeri ah iyo waajibaadyo adag, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato meesha aad ka bilaabayso.
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo la heli karo si aad u siiso mareegahaaga awoodaha ecommerce. Maqaalkan, waxaan ku dhex mari doonaa qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan sida loo sameeyo aaladaha ecommerce-ka boggaaga si markaa goobtaada jireed ay u xirnaan karto dadweynaha guud, waxaad weli haysataa fursad aad ku kobcin karto si dhijitaal ah.
Qaybaha dhijitaalka ah ee fudud ee ganacsiyada maxaliga ah
Haddii aadan hadda lahayn degel, markaa qaybtan adigaa leh. Haddii aad leedahay degel laakiin aad raadinayso beddel sahlan oo lagu maareeyo oo lagu naqshadeeyo, qaybtan sidoo kale adigaa leh. Sanadihii la soo dhaafay waxaa sare u kac ku yimid habsocodyada dhijitaalka ah oo dhib badan oo niyad jabsan, mid ka mid ah waa abuurista iyo dayactirka mareegaha. Waagii hore, waxaad noqon lahayd inaad kireysato horumariye mareegaha si uu kuu dhiso ama waa inaad barataa sida loo sameeyo adiga oo isticmaalaya aaladaha maskaxda kabuubiya sida WordPress. Marka la soo koobo, waxay ahayd xanuun inaad si deg deg ah u dhisto degel adiga qudhaadu. Si degdeg ah ugu socota 2020 oo waxaad si fudud u dhisi kartaa degelkaaga aasaasiga ah habeen gudaheed. Intaa waxaa dheer, dhammaan kuwan "laftaada samee" waxay bixiyaan xalalka ecommerce kuwaas oo siyaabo badan uga fiican meelaha taagan iyo plugins.
Squarespace waxay ahayd mid ka mid ah dhisayaashii degelka ee ugu horreeyay ee si dhab ah uga dhigaya habka mid fudud oo la heli karo dadka guud ee hal-abuurka leh ee hal-abuurka leh iyo hal-abuurka. Isticmaalayaasha Squarespace waxay awood u leeyihiin inay doortaan qaabka template aadka ugu habboon ganacsigooda ama adeegsigooda gaarka ah ka dibna waxay isticmaalaan jiida iyo hoos u dhigista walxaha si ay si dhakhso ah u abuuraan shabakad jilicsan oo xirfad leh. Waxaad ka iibsan kartaa domain iyada oo loo marayo Squarespace ama waxaad ku wareejin kartaa bogga hore u jiray.
Squarespace waxa kale oo ay leedahay is-dhexgalka gaar ahaan ganacsiyada doonaya in ay ku iibiyaan alaabadooda internetka. Waxaad awood u leedahay inaad ku qaadato lacag-bixinta onlaynka ah adigoo isticmaalaya Stripe, PayPal, oo aad aqbasho lacag-bixinaha shaqsi ahaan qalabka Square. Kuwa alaabta ka soo gadanaya goobtaada waxay awoodi doonaan inay baadho oo ku daraan alaabta gaadhigooda sidii ay ula samayn lahaayeen tafaariiqda kale ee internetka. Squarespace waxa kale oo ay bixisaa doorashooyin badan oo waxka bedelka ah sida ogeysiisyada helitaanka xaddidan iyo awoodda lagu abuuro sahan macaamiisha ah ama la wadaago fariinta hibada. Aaladaha cashuuraha ee loo yaqaan 'Squarespace's tax's ayaa ka dhigaya u hogaansanaanta mid fudud awooda lagu dejinayo heerarka cashuuraha maxaliga ah ee wadamada iyo gobolada, qiimaynta cashuurta lagu daro, iyo xeraynta cashuurta iibka ee tooska ah.
Tartamiyaha tooska ah ee Squarespace, Wix wuxuu bixiyaa ganacsiyo iyo shakhsiyaad leh khibrad jiidis iyo jiid la mid ah. Sida Squarespace, waxaad awood u leedahay inaad ka doorato tiro mawduucyo ah iyo qaabayn aad aaminsan tahay inay si fiican ula jaan qaadayaan astaanta ganacsigaaga oo halkaas ka beddelo sida aad jeceshahay. Wix sidoo kale waxay leedahay madal ecommerce ah oo si buuxda ugu go'an ganacsatada iyo ganacsiyada yaryar ee raadinaya inay si dijital ah u iibiyaan alaabadooda.
Waxay u muuqataa in Wix ay wax yar ku maalgelisay awoodooda ecommerce marka loo eego Squarespace maadaama nuqulka suuqgeyntooda iyo meeleyntooda ay ku dhejiyeen inay la tartamaan aaladaha sida Shopify. Waxay si cad u leeyihiin rabitaan ah inay noqdaan dukaankaaga joogsiga ah ee adeegyada shabakada iyo sidoo kale dukaankaaga internetka. Lacagaha Wix Payments, waxaad ku maareyn kartaa dhammaan macaamil ganacsiyadaada oo aad aqbasho lacag bixinta khadka ah ee sugan dhammaan hal dashboard. Marka la barbardhigo Squarespace, waxay u egtahay in Wix uu leeyahay meheradda ecommerce-ka ugu adag guud ahaan.
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah qalabkani ay fududeeyeen weligood in la dhiso degel adiga keligaa ah, had iyo jeer waxaa jira ikhtiyaarka ah in laga saaro abuurista xirfadle. Qodobka ugu weyn ee xirfadlayaal badani ay gacan sare ku yeelan doonaan waa dhinaca hagaajinta beddelka. Waxa jira tiro tafaasiil yar yar ah iyo nuances xagga shabakada iyo dhismaha bogga soo degaya kuwaas oo haddii si sax ah loo faa'iidaysto kordhin kara itimaalka ay isticmaalayaashu kaa iibsan karaan.
Hagaajinta beddelka waxay yeelan kartaa wax la taaban karo, muddada dheer, saafiga ah faa'iidada ganacsigaaga taas oo (haddii xirfadlaha saxda ah la doorto) ay u dhimi doonto kharash kasta oo lagu abuurayo mareegaha waqti ka dib.
Faahfaahintan qaarkood waxa ka mid ah sida hagitaanku u jihaysan yahay, luqadda qancisa ee la isticmaalo, habka qaybta gaadhiga wax iibsigaaga loo hagaajiyo, iyo sidoo kale soo jiidashada guud ee bilicda.
Goobaha u gaarka ah ecommerce ee ganacsiyada maxaliga ah
Waxaa jira dhowr goobood oo aad u isticmaali karto si aad u dhisto degel internet ecommerce/dukaanka khadka ah kaas oo ka dhigi kara habka iibinta alaabtaada mid aad u fudud. Dhisayaasha mareegaha aan kor ku soo sheegay waxay leeyihiin iskudhafyo u oggolaanaya hawlgal yar oo si guul leh loogu maareeyo habka iibka internetka. Si kastaba ha ahaatee, ganacsiyada qaar ayaa laga yaabaa inay rabaan gambaleelka dheeraadka ah iyo foorida ee la socota qalab shabakadeed oo khaas ah ecommerce-ka buuxa. Waa kuwan qaar ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la tixgeliyo haddii aad rabto inaad jidkaas qaado:
Mid ka mid ah kuwa ugu weyn uguna ballaaran ee la qaatay, Shopify waa goob ecommerce ah oo kuu oggolaaneysa inaad sameysato dukaan khadka ah oo aad wax ka iibiso. Sharaxaaddani si khiyaano leh ayey u ballaadhan tahay, si kastaba ha noqotee, sababtoo ah Shopify waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso waxyaabo badan oo la xiriira iibinta khadka tooska ah ee ka sarreysa oo ka baxsan tartamayaasha badan ee suuqa.
Si la mid ah Squarespace iyo Wix, waxaad ka iibsan kartaa bogga internetka Shopify, dooro mawduucyada, calaamadee oo habayn kartaa dukaankaaga, marka lagu daro suuqgeynta suuq-geynta iyo qalabka SEO ee aad gacanta ku hayso. Waxaan kula talin lahaa Shopify ganacsiyada ay dhab ka tahay u wareejinta qayb badan oo ka mid ah hawlahooda onlaynka ah. Kuwa leh dukaamada yaryar ee maxaliga ah, waxay u samayn kartaa macno dheeraad ah in ay raacaan ikhtiyaarrada aan tafatirin, si kastaba ha ahaatee. Waxaad maareyn kartaa alaabada, lacag-bixinta, iyo dhoofinta marka lagu daro noocyo kala duwan oo gaari-gacmeed iyo ikhtiyaaro khibradda macmiilka ah.
Haddii aad hore u lahayd degel, waxaad isku dari kartaa Shopify adoo isticmaalaya "Buy Button." Iibka badhamada waxay tusi karaan sawirada alaabta, sharaxaada, iyo qiimayaasha, dhammaan inta u ogolaanaysa macaamiisha inay iibsadaan alaabada iyagoon ka tagin shabakada. Beddel ahaan, waxaad ku xidhi kartaa dukaankaaga Shopify ee khadka tooska ah adoo adeegsanaya mareegahaaga shabakad, intaad haysato xulashooyinka la beddeli karo si aad u ilaaliso astaantaada.
Kuwa boggoodu ku dhisan yahay WordPress, WooCommerce waxay siisaa meel la beddeli karo, madal il furan ecommerce. WordPress wuxuu siiya dhisayaasha mareegaha wax badan oo kala duwanaansho leh marka ay timaado faragelinta plugins ee la heli karo. WooCommerce waxaa loogu talagalay kuwa raadinaya wax-ka-beddelka iyo wax-ku-beddelashada si ay u dhistaan ​​dukaankooda khadka tooska ah ee gaarka ah baahidooda. Marka la eego in WordPress sida caadiga ah aysan ahayn ikhtiyaar la jecel yahay kuwa ku jira dhinaca aan khibradda lahayn ee dhismaha mareegaha, waxaan ku talin lahaa qaar ka mid ah fursadaha fudud iyo kuwa saaxiibtinimo leh.
5. Ganacsiga Weyn
Si la mid ah Shopify, Ganacsiga Weyn wuxuu siiyaa ganacsiyada qalabyo kala duwan iyo dabacsanaan xagga abuurista khibrad wax iibsiga onlaynka ah macaamiishooda. Qaabka ay u dhigmaan waxa ka mid ah bog dhisaha jiid-iyo-hoos u samaynta, habaynta mawduuca, habaynta hubinta, tayaynta mobilada, iyo sidoo kale is dhexgalka WordPress.
6. Roodhida makhaayadaha
Marka la eego in warshadaha makhaayadda ay si muran leh ugu dhufatay saameynta COVID-19. Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha makhaayadaha maxalliga ah waxay u baahan yihiin inay bilaabaan inay si dhijitaal ah u fikiraan iyadoo ay ku jiraan qufullo soo socda iyo xannibaado dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada shaqsiga ah. Mid ka mid ah shirkadaha makhaayadaha gaarka ah ee halkaas ka shaqeeya oo wax badan ka caawinaya warshadaha makhaayadda waa Toast.
Haddii aad leedahay ama aad maamusho makhaayad waxa laga yaabaa in aad taqaano tignoolajiyada iibka adag ee Toast. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego xaaladaha warshadaha ee soo koraya, makhaayado badan ayaa arkaya wax badan oo ka mid ah dakhligooda iyada oo loo marayo dalabaadka internetka. Toast ayaa habraacan u fududaysay makhaayadaha iyadoo siisay qaybtooda Dalbashada khadka tooska ah ee Dijital ah. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa makhaayadaha inay si toos ah uga qaataan amarrada macaamiisha iyaga oo aan ku tiirsanayn guddiyada adeegyada kale. Ku beddel summadaada dhijitaalka ah iyo joogitaanka moobilka khibrad la hagaajiyay macaamiishaadu way jeclaan doonaan halka shaqaalahaagu ay waqti yar ku qaataan taleefanka. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan habka dalbashada dhijitaalka ah ee Toast eeg halkan.
Doorashada goobta saxda ah ee ganacsigaaga deegaanka
Inkasta oo ku dhawaad ​​qof kastaa uu si sahlan ugu dhex socon karo internetka, dhismaha (ama kordhinta) ganacsigaaga online wuxuu noqon karaa mid adag, gaar ahaan haddii aanad khibrad badan u lahayn goobta horumarinta webka. Waxaa jira qalab aan tiro lahayn oo loo isticmaalo, laakiin xulashada kan saxda ah waxay hoos ugu dhacdaa baahiyahaaga ganacsi ee gaarka ah iyo sidoo kale kakanaanta iyo baaxadda aad rabto inaad kobciso joogitaankaaga ecommerce.
Haddii aad tahay ganacsi yar oo maxalli ah oo kaliya oo raadinaya inaad bixiso dalabka online-ka ee alaabada, markaa waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho qaar ka mid ah xulashooyinka shabakada fudud ee isticmaale-saaxiibtinimo. Haddii aad raadinayso inaad u hurto hawlahaaga ganacsi si aad u beddesho si dijital ah, ama aad ugu horrayn u noqoto mid dhijitaal ah, markaa waxaan kugula talin lahaa inaad raacdo aaladaha ugu adag.
Markay tignoolajiyadu sii socoto, mareegaha si fudud loo isticmaali karo iyo aaladaha ecommerce ayaa soo baxay. Ku dhawaad ​​qof kastaa wuu gali karaa onlayn oo abuuri karaa suuq-ganacsiyeedka. Furaha guusha waa in laga dhigo suuqaas mid ku habboon baahiyaha macaamiishaada oo sida ugu fudud ay kuugu iibsan karaan intii suurtagal ah.
Sida loo isticmaalo MailHog si loo tijaabiyo iimaylada gudaha (Hagaha Tallaabo-tallaabo)
Habka Aadanaha ee Automation-ka Suuqgeynta